Isifo sikashukela singalawulwa kanjani ngaphandle kwamaphilisi? > Ukwelashwa nokuvimbela
Ngabe isifo sikashukela singalashwa unomphela?
Bazokwelashwa kanjani abantu abanesifo sikashukela abenqaba izidakamizwa? Faka esikhundleni amaphilisi ngokudla okufanele kanye nohlelo lansuku zonke. Ukusebenza ngokudla kwakho nendlela yakho yokuphila kuzosiza abantu ukulawula izimpawu zesifo.
Kodwa-ke, ochwepheshe baxwayisa ngemiphumela emibi engaba khona kanye nokungaphatheki kahle okuthile. Lokhu kungenxa yokuthi kuzoba nzima kumuntu ukuthi akhe kabusha. Kungaba nzima futhi nokuguqula umbuso uqobo, ngakho-ke kufanele uxoxe nodokotela wakho.
Isifo sikashukela sohlobo 2 singanqotshwa ngaphandle kwemithi. Ukuze wenze lokhu, kufanele:
Landela isidlo ukuze ubuyisele umsebenzi we-pancreas ofanele. Yidla kaningi, kepha ezingxenyeni ezincane (umsoco okonakele), wenqaba ukudla kwe-carbohydrate (uma kungenakwenzeka ukugcwalisa, bala amayunithi esinkwa)
Phila impilo esebenzayo ngaphandle kokugwema ukuzikhandla ngokomzimba. Inketho enhle kakhulu yi-Cardio - ukuhamba, ukuhamba ngebhayisikile, i-aerobics yamanzi.
Ukwelashwa ngamakhambi, imikhiqizo yemvelo. Babhekana nenkinga emibi kunemithi. Isibonelo, imbewu yefilakisi izosiza ekuhlanzeni isibindi, ithuthukise umgudu wokugaya ukudla. IGinseng ivuselela amaseli e-B ukukhiqiza i-insulin. Kodwa-ke, kubalulekile ukuthi ungakhohlwa ukubonana nodokotela wakho ngaphambi kokusebenzisa izitshalo ezintsha zokwelapha.
Vakashela i-sanatorium. Imithombo yezimbiwa inomthelela ekususeni ubuthi nasekuhlanzweni komzimba.
Ngabe ushukela ungalashwa ngaphandle kwamaphilisi?
Esimweni sohlobo lokuqala lwesifo, yiqiniso, imithi ayikwazi ukuhanjiswa, ngenkathi ukwelapha uhlobo lwesibili sikashukela ngamaphilisi kungenzeka kube ngumsebenzi wokuthengisa. Ngemuva kwakho konke, akekho noyedwa umuntu ongalapheka ngale ndlela. Kepha ukuzivocavoca komzimba kanye nokudla okufanele kunomthelela omuhle kakhulu emzimbeni we-diabetes.
Lokhu kwenzeka ngezizathu ezisobala. Uhlobo 2 sikashukela lukhula kubantu abaneminyaka yobudala, ikakhulukazi uma ukhuluphele. Konke lokhu kungumphumela wokungondleki kahle, imithwalo esindayo esibindini nasemithanjeni yegazi. Ukubhekana nale nkinga, udinga ukushintsha indlela yokuphila futhi ubuyisele imisebenzi ejwayelekile yezitho ezithintekile.
Ngabe isifo sikashukela singalashwa?
Ukuzwisisa le nkinga, kufanele uqale ukhumbule umongo walesi sifo.
Isifo sikashukela yisifo lapho umuntu enezinkinga khona ukulawula ushukela wegazi. Lokhu kwenziwa yi-hormone i-insulin, etholwa ngamanyikwe. Ngokuya ngohlobo lwesifo, i-insulin ingakhiqizwa ngamanani anganele noma isetshenziswe ngempumelelo ngamasistimu abalulekile.
Ngokukhula kweshukela egazini - i-hyperglycemia, kunokuphazamiseka kancane kancane kwezinhlelo eziningi. Okuthinteka kakhulu yizinzwa nezinzwa zenhliziyo.
Isifo sikashukela i-mellitus yisifo esingamahlalakhona. Akunakwenzeka ukukuqothula ngokuphelele. Okokuqala, lokhu kukhathaza isifo sikashukela 1, ngoba izimbangela zokukhiqizwa kwe-insulin enganele.
Esimweni sohlobo lwesibili lwesifo, izimbangela zifundwa ngokujulile: ukuzwela kwezicubu okunganele kwe-insulin kuhlotshaniswa nezinqubo ze-metabolic ezihamba kancane ezibangelwa ukungasebenzi kahle komzimba. Isifo sikashukela sohlobo 2 naso sinezimbangela zofuzo, futhi odokotela abakafundanga ukubathonya.
Ukwelashwa kwalesi sifo kubandakanya ukulwa nobunzima be-metabolism futhi kuvame ukwelashwa ngemithi. Kepha ukukhanya kwangaphandle kuphikiswa nesidingo sokubheka ngokuqinile isimo somzimba impilo yonke, ngoba lesi sifo sibuya ekukhululekeni okuncane
Umuthi unikeza ukwelashwa okusebenzayo okuvimba lesi sifo futhi kube nomphumela waso ezindinganisweni zokuphila ezingabonakali. Ngidinga ukuphathwa impilo yami yonke. Ukwenqaba kulo kuholela ekubuyeleni emuva, okungaba yingozi enkulu.
Kwenzekani uma isifo sikashukela singelashwa?
Ukushoda kwe-insulin noma ukuzwela okwanele kwezinhlelo ezibalulekile kuyo kuzoholela ekwandeni kwamazinga kashukela wegazi - i-hyperglycemia. Lesi simo siyingozi kakhulu futhi esikhathini esifushane singadala i-hyperglycemic coma noma ukufa.
Ungasiphathi isifo sikashukela.
Lokhu kuxilongwa kudinga ukwelashwa okuqhubekayo nokwenziwa okuphelele, okuzonxephezela izimbangela zentuthuko yayo.
Uma sikhuluma ngesifo sikashukela esincike ku-insulin, isiguli sidinga imijovo ejwayelekile ye-insulin elawula amazinga eglucose egazini.
Uma ukuxilongwa kungushukela ongaxekile we-insulin, isiguli sidinga ukwelashwa okuyinkimbinkimbi. Ukusebenza ngokomzimba kuthuthukisa izinqubo ze-metabolic futhi, ngokufanelekile, ukuzwela kwezicubu kwe-insulin. Futhi izidakamizwa zilawula izinga le-glucose egazini, elanda ngenxa yokuncipha kwe-insulin.
Ukuntuleka kokwelashwa okwanele kungaholela ezinkingeni ezinkulu, ezihlukaniswe kalula zaba ngamaqembu amabili:
Izinkinga ezinesifo sikashukela ezincane:
Indawo yeLesion Izinkinga
Amehlo I-Cataract, i-glaucoma, i-retinopathy yesifo sikashukela.
Izinso Ukwehluleka kwangempela
Isistimu yezinzwa ephakathi Ukuhamba kancane kokuqwashisa, izinkinga ngezitofu, izinkinga nge-erection, ukuphazamiseka endaweni yokuhlanza nokuhlanza, ubuthaka obujwayelekile.
Izinkinga ze-Macrovascular izifo ezibangelwa ukulimala kwemithambo yegazi emikhulu. Lokhu kufaka phakathi:
ezinye izifo zohlelo lwethambo nenhliziyo.
Umgomo wokwelapha lesi sifo ukubuyela emazingeni ajwayelekile kashukela wegazi ngokunxephezela imisebenzi yomzimba engasebenzi kahle.
Esimweni sohlobo lwesifo sokuqala, lokhu kungukuwelapha kwe-insulin, uhlobo lwesibili kungukushintsha okukhulu kwendlela yokuphila. Ukubuyiswa kwemisebenzi yomzimba engasebenzi yisiqondisi esikhulu sokwelashwa kwalesi sifo. Uma ungayisebenzisi noma uyisebenzisa ngevolumu enganele, ushukela uzoqala ukuthuthuka futhi uholele emiphumeleni engenakulungiswa.
Ukwelapha isifo ngokuqhubekayo akunakwenzeka. Kuze kube manje, akukho ngisho nokuqonda okuyikho kwezizathu zokuthuthuka kwezinkinga nge-insulin secretion. Futhi lesi yisizathu esiyinhloko sokuthi lokhu kutholwa kungenye yezinto ezivame kakhulu emhlabeni.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela kuwo wonke amacala ajwayelekile kulula impela: uma kwenzeka isifo sikashukela sohlobo lokuqala, lokhu kuyimijovo ejwayelekile ye-insulin impilo yonke, enxenxa ukungabi bikho kokukhiqizwa okungokwemvelo kwalesi hormone. Azikho izindlela zokusebenzisa ukukhiqizwa kwemvelo kwe-insulin.
Ngohlobo 2 sikashukela, ukwelashwa kudinga ukwelashwa okuyinkimbinkimbi:
ngenxa yokuzivocavoca ngokomzimba, ukuzwela kwezicubu ukungena kwe-insulin kuyathuthuka,
Ukudla okuqinile kusiza ukulwa nesisindo ngokweqile (imbangela eyinhloko yaleli hlobo lesifo) futhi kulawula ukuthathwa kweshukela,
ukuthatha imishanguzo kulawula amazinga kashukela egazini. Inkomba okumele ilawulwe yi-insulin.
Lezi zingqondo zisimboza ngokuphelele isihloko sokulashwa kwesifo sikashukela. Kunezici esimweni ngasinye, kepha indlela ejwayelekile ayishintshi.
Futhi okubaluleke kakhulu: ukwelashwa akusinqobi ngokuphelele lesi sifo. Umisa ukubonakaliswa kwakhe futhi enze impilo yesiguli ibe ntofontofo futhi ibe yinde.
Impendulo yalo mbuzo ayinangqondo - cha.
Lesi sifo singamahlalakhona. Futhi akufanele uthembele kumasu wokudala kanye nezindlela zokupheka ugogo, ezisinikeza ngomusa kuzo zonke izinhlangothi.
Amacala lapho kungenzeka khona ukuthi ayeke lesi sifo aze afike ezingeni lomuntu ophilile akhona. Futhi kaningi bakhonzwa njengokululama okuphelele. Kepha lokhu akunjalo. Lokhu kungumphumela wokwelashwa okwanele nesimo sengqondo sendlela yokuphila.
Noma yikuphi ukuphambuka emithethweni eqinile yempilo yesifo sikashukela kuzoholela ekugxumeni emazingeni kashukela nokukhula kwesifo.
Muva nje, inhlangano egunyazayo iRusmedserver Discussion Club, ehlanganisa namakhulu odokotela, ikhiphe incwadi evulekile mayelana "nezindlela ezintsha zokuthola ukwelashwa ngokuphelele ngalokhu kutholwa." Nasi isicashunwa esifushane kuyo:
“Muva nje, izindatshana ezikhuthaza 'izindlela ezintsha zokulwa' nesifo sikashukela ziye zavela emithonjeni yezokuxhumana. (...) Bafaka isithembiso sokusindisa iziguli ezinesifo sikashukela ekuthatheni izidakamizwa ezinciphisa ushukela kanye ne-insulin ngokuzikhandla okukhulu ngokomzimba.
Sigqugquzela abashicileli kanye nababhali bezindaba ukuthi bathathe indlela elinganiselayo nenesibopho sokushicilela imininingwane ngezindlela zokwelapha ezingejwayelekile. Ngokukhumbula amandla wegama eliprintiwe, kubalulekile ukuqonda ukuthi konke ukushicilelwa okuxakile kungaholela kwimpilo engeyinhle, futhi, kwezinye izikhathi, ekufeni kwamakhulu, futhi ngezinye izikhathi izinkulungwane zabantu abagulayo. ”
Lesi sitatimende siphathelene nezinto zokwelapha nezindlela zokuthola ukululama okugcwele kusetshenziswa ezinye izindlela zokwelapha ushukela. Kusukela kulo mbhalo kuba sobala ukuthi ngefomu lesifo elincike e-insulin, akunakwenzeka ukunxephezela ukungabi bikho kokukhiqizwa kwe-insulin ngaphandle kwemijovo yangaphandle yaleli hormone. Ngokuzivocavoca okungazimele kwe-insulin, badlala indima ebalulekile, kepha ngisho nalokhu abayona ipanacea yokusetshenziswa okuzimele. Lona umbono weqembu eligunyaziwe lochwepheshe.
Isifo sikashukela esikhulelwe
Ukuze kungabikho muntu ohlambalaza lokhu okusetshenziswayo njengento engezansi, akunakwenzeka ukuba ungathinti uhlobo lwesithathu lwesifo eselashwa - isifo sikashukela sabesifazane abakhulelwe (gestational).
Le nkulumo iqondwa njengesifo (esivame ukubizwa hhayi ngesifo, kepha isimo), sibonisa i-hyperglycemia (ushukela wegazi ophakeme) ngesikhathi sokukhulelwa. Lesi sifo asisikhulu futhi ngemuva kokuzalwa, izinkomba ze-glucose zizinza ngokwazo.
I-pathogenesis yesifo sikashukela sokukhulelwa ukunciphisa umbono we-glucose ngezicubu ngokumelene nesizinda sokwanda kokuxineka kwama-hormone okukhulelwa egazini.
Kukholelwa ukuthi isifo sikashukela sokukhulelwa singumlingisi wesifo sikashukela sohlobo 2. Kepha abukho ubufakazi balokhu kucatshangelwa kwezifundo eziningi. Kukhona kuphela ukuhlaziya kwezibalo ngesampula encane, okukhombisa ukuthi abesifazane ababenesifo sikashukela sokukhulelwa ngesikhathi sokukhulelwa esimweni ngasinye sesibili ngokuzayo bahlushwa uhlobo lwesibili lwesifo.
Umbuzo uphakama ngokwemvelo: yini engenziwa ngokuthola ukwelashwa okudingekayo?
Imiphumela yokwelashwa kufanele ihlolwe ngokuya ngohlobo lwesifo sikashukela.
Kuhlobo lokuqala, imijovo ye-insulin ejwayelekile ilawula kahle amazinga kashukela egazini bese ibuyisela isiguli empilweni egcwele. Omunye uzosho ukuthi imijovo eqhubekayo yokuphila yonke ayihambelani nomqondo wempilo ephelele. Yebo, lokhu kuvame ukungakhululeki. Kepha uma siqhathanisa izinkinga ezingenzeka ngaphandle kwemijovo nokungahambi kahle kokusetshenziswa kwaso, kuvela ukuthi lokhu, kuleli cala, kungukuphazamiseka okuncane.
Imijovo ye-insulin engaguquki ivumela isiguli ukuba siphile isikhathi eside futhi sijabule. Lesi sifo asisathinti isikhathi saso, ngoba ukuntuleka kwe-insulin kunxeshezelwe kusuka ngaphandle.
Isifo sikashukela sohlobo 2 sihlinzeka nge-prognosis enhle ngendlela efanele. Inhlanganisela yomsebenzi womzimba, ukudla nezidakamizwa ukulawula amazinga kashukela, kuphumula konke ukubonakaliswa kwalesi sifo futhi kubuyisela isiguli empilweni ejwayelekile. Inkomba yesikhathi sokuphila kweziguli esezikhulile idlula iminyaka eyishumi, okuwumphumela omuhle kakhulu kulolu hlobo lwesifo.
Ngokwezibalo, isikhathi sokuphila kweziguli ezinesifo sikashukela yiminyaka engama-60. Ngokugula kohlobo lwesibili baphila isikhathi eside: abesifazane abaneminyaka engama-76 kanye nabesilisa abaneminyaka engama-70 ubudala.
Lezi zibalo zibonisa ukuthi nangendlela efanele, ukutholakala kwezifo kusongela impilo yakho. Ngaye, ungaphila ngokugcwele kuze kube semdala kakhulu.
Ngale ndlela, eRussia kunendondo "yeminyaka engu-50 yesibindi esinesifo sikashukela". Usevele unikezwe amaRussia angama-40. Inkomba ehlonishwayo nesisusa esihle sabo bonke abanesifo sikashukela.
Ukwelashwa kukashukela ngaphandle kwezidakamizwa
Ngokufanele ngoba umuthi wendabuko awunikezi izindlela zokwelapha eziphephile nezisebenzayo, umbuzo wokuthi ungalapha kanjani isifo sikashukela sohlobo 2 ngaphandle kodokotela nemithi usuvame kakhulu.
Ngaso leso sikhathi, kukholelwa kabanzi ukuthi isifo sikashukela asikwazi ukubhekwa njengesifo, kodwa i-pancreatic pathology ejwayelekile, ethi ngenxa yezizathu ezahlukahlukene iqale ukusebenza ngokungalungile. Ngenxa yalokhu, okuqukethwe ushukela egazini lesiguli kuqala ukwanda, okungaholela ekuwohlokeni kwempilo yeziguli.
Isizathu sokuthi ukwelashwa kohlobo lwe-2 yesifo sikashukela ngaphandle kodokotela nemithi kungasebenzi ngokwanele ngokuyinhloko ukuthi imbangela yokuvela kwayo ibingakaziwa. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, kukhona imizamo yokuxhuma ukubonakala kwayo nefa, izinguquko ze-pathological kumanyikwe, kanye nokukhulu ngokweqile kanye nobudala. Ngaso leso sikhathi, asikho imbangela ethembekile yesifo sikashukela esesitholakele.
Uma sithatha izinhlobo zokwelapha zendabuko, bese sithayipha isifo sikashukela sesibili namuhla sizama ukwelapha ngokungenisa i-insulin yokufakelwa emzimbeni, kanye nokudla izidakamizwa ezinciphisa kakhulu amazinga kashukela egazi. Ngokuqondene nokwelashwa ngaphandle kwezidakamizwa, labo ososayensi abafanayo bezokwelapha basikisela ukuthi bangaselapha isifo sikashukela “sesibili” ngokusebenzisa ukudla okufanele, ukuvivinya umzimba njalo, nokusebenzisa izindlela ezinamalungelo okushicilela okuhloswe ngazo ukwehlisa amazinga kashukela egazini.
Uhlu lwamasu anjalo namuhla luhlanganisa:
Indlela yokusebenza kweKonstantin Monastyrsky,
Uma zonke izindlela ezingenhla zisetshenziswa kahle, inqubekela phambili enkulu ingenziwa ekwehliseni isifo sikashukela ngaphandle kwezidakamizwa.
Ngenxa yalokhu, isimo sezempilo sizothuthuka, futhi isiguli empeleni ngeke sikudinge ukusetshenziswa kwemithi. Ngaphezu kwalokho, ukwelashwa okunjalo kushibhile kakhulu kunokujwayelekile.
Ngabe ukuphefumula kuphulukisa isifo sikashukela ngaphandle kwezidakamizwa? Le ndlela yokwelapha isifo sikashukela ngaphandle kwezidakamizwa isebenzisa lokho okubizwa ngokuthi “ukuphefumula” okuphefumulelwe kwaqanjwa nguYuri Vilunas. Ngakho-ke, wabhala incwadi "Isifo sikashukela siyelapheka." Le ncwadi ichaze kabanzi ukuthi ushukela ungalashwa kanjani usebenzisa amandla okushayela womzimba womuntu. Njengomphumela wokusebenzisa le ndlela, ukwelapha ushukela ngaphandle kwamathebulethi kwenzeka kungakapheli inyanga eyodwa.
Ngokombono wezobuchwepheshe, le ndlela ukwenza izivivinyo ezikhethekile zokuphefumula okuhlose ukwehlisa amazinga kashukela egazini. Umqondo uwukulungisa ukuphefumula okungafanele, okuholela ekuphepheni kwe-glucose egazini ngenxa yokuvela kwe-hypoxia yezicubu ze-pancreatic. Le nto iholela ekuwohlokeni ekukhiqizweni kwe-insulin.
Ukuze wenze izivivinyo zokuphefumula ngokwendlela echaziwe, kubalulekile ukufunda ukuthi ungaphuma kanjani futhi ukhiphe ngomlomo. Kulokhu, ukuphefumula kufanele kube isikhathi eside ngangokunokwenzeka, kufane futhi kufane ngesikhathi. Ukuze uzuze umphumela omuhle, kuyadingeka ukuthi uqale ukhishwe ngomsindo "foo-o-o-o-o" bese uqala ukubala engqondweni. Ngemuva kwesikhathi esithile, umzimba uzojwayela ukuphefumula ngejubane elifanayo futhi ugcine ukubala ngeke kudingeke.
Ukuphefumula okunale ndlela kufushane. Ukuze wenze lokhu, kufanele uqale uvula umlomo wakho futhi ugwinye umoya. Okulandelayo, phefumula kancane. Ngale njongo, umoya omfishane wenziwa ingapheli imizuzwana engu-0.5, emva kwalokho badlulela emphefumulweni olinganisele umzuzwana owodwa.
Imvamisa, sonke isikhathi sokuphefumula ngale ndlela asihlali imizuzu engaphezu kwemibili. Ngokwemvelo, amaseshini anjalo kufanele enziwe okungenani izikhathi eziyisithupha ngokulandelana ngosuku. Uma le ndlela isetshenziswe kahle, khona-ke ngemuva kwezinyanga ezimbalwa imiphumela ingabonakala.
Imiphumela esemqoka yalomsebenzi kungukujwayelekile kwamazinga kashukela, kanye nokunyamalala kobuthakathaka nokudangala.
Sebenza kwendlela Yezindela
Elinye ithuluzi ukunciphisa isimo sesiguli esinohlobo 2 sikashukela kuyindlela yezindela. Kususelwa ekudleni okufanele futhi kuchazwe ngokuningiliziwe encwadini ethi Functional Nutrition. Umnyombo waso ukunciphisa izabelo noma ukusetshenziswa komsoco we-carb ophansi.
Ngakho-ke, ngokwesibonelo, ekuncomeni kombhali wale ncwadi, iziguli ezinesifo sikashukela kufanele zidle kuphela ezingxenyeni ezincane futhi kuphela lapho zizizwa zilambile.
Ngasikhathi sinye, akufanele zidle ukudla okuqukethe ushukela nesitashi, ngoba lezi zakhi zomzimba zenzelwe i-glucose ngesivinini esisheshayo. Isibonelo, kwenqatshelwe ukudla ukudla okufana nenyama, ilayisi, izithelo, amajusi amnandi, njll.
Ukudla kwasolwandle nezinhlanzi zasolwandle.
Izinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo yobisi, okungukuthi i-kefir, iyogathi, ibhotela nobisi.
Imifino yazo zonke izinhlobo, ngokwesibonelo, ezinjengamakhukhamba, ithanga, upelepele, iklabishi.
Izithelo, okungukuthi amagilebhisi, ama-apula noma ulamula.
Izinhlobo zamakhowe namakhambi.
Kungenzeka kuphela ukukhetha ukudla okukodwa uma isiguli sizokwenza ukuhlolwa kwe-glucose njalo ngemuva kokudla. Imvamisa, izivivinyo ze-expression zisetshenziselwa lokhu, ezithengiswa kunoma iyiphi ikhemisi.
Ngaphezu kwalokho, lokhu kudla kungakhethwa ngenkathi isiguli sisesibhedlela, futhi kubalulekile ukuthi izincomo zeKonstantin Monastery zilandelwe.
Ngaphezu kokuzivocavoca ngokuphefumula, umuthi wendabuko uvame ukusetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela. Iqiniso ngukuthi izitshalo eziningi zemithi zivame ukwehlisa amazinga kashukela egazini. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, ukusetshenziselwa ukwelashwa:
Ama-Blueberries esifo sikashukela, noma kunalokho decoction wamaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka.
ukumnika kwamaqabunga amasha e-nettle.
ukumnika kwezimpande ze-dandelion.
Ngaphezu kwalokho, uma isiguli sitholakala sinesifo sikashukela, kuzodingeka ukuthi sifake ekwakhekeni imikhiqizo enjalo ethuthukisa ukuhamba kwegazi futhi ikhuphule ukungatheleleki okunjengama-anyanisi amasha, ugalikhi kanye nojusi wegalikhi. Futhi, izithasiselo zemvelo kanye nama-tinctures avela ku-ginseng aphethe ukulawula i-metabolism emzimbeni. Ngenxa yalokho, umuntu angathola imiphumela emihle ekwelashweni kwesifo sikashukela ngaphandle kokusebenzisa i-insulin replacement therapy.
Uma uthatha iresiphi ethile, imvamisa basebenzisa umuthi olungiselelwe kusuka ezimpandeni ze-dandelion. Ukuze wenze lokhu, wezipuni ezimbili zezimpande ezomile kumele zigcwaliswe ngesigamu selitha lamanzi abilayo futhi kwagcizelelwa ku-thermos. Ukumiliselwa okulungele kufanele kudakwe uhhafu wenkomishi isigamu sehora ngaphambi kokudla. Kumele kuqashelwe ukuthi amaqabunga e-dandelion ayinhlangano ye-anulin yemvelo ye-insulin, ngenxa yalokho, anganciphisa kakhulu isimo sesiguli esinesifo sikashukela.
Ukudla Nesikhathi Sokuphuza
Into esemqoka yokwelashwa okungeyona yezidakamizwa yesifo sikashukela kukudla. Azikho ezinye izindlela ezinomphumela onamandla ushukela wegazi njengokudla okufanele. Ngokuya ngohlobo lwesifo, imikhawulo ingahluka kancane. Umgomo oyinhloko wukuncipha okukhulu ekusebenziseni ushukela nokudla okumnandi (futhi ngesifo sikashukela sohlobo 2, ukwenqatshwa okuphelele kwale mikhiqizo kuyadingeka).
Kunoma yikuphi, udinga ukunikela ukukhetha kuma-carbohydrate ayinkimbinkimbi, aphekwe phansi isikhathi eside emzimbeni futhi angabangeli ushintsho olungazelelwe kushukela wegazi. Kule vidiyo, i-endocrinologist iphendula imibuzo yokuthi isifo sikashukela singalapheka yini, futhi ichaza ukuthi kubaluleke kangakanani ukugcina ukudla okulinganiselayo futhi uthintane nodokotela ngesikhathi.
Ngohlobo oluthambile lwesifo sikashukela esingu-2, ukudla kungasiza ekugcineni ushukela wegazi ojwayelekile ngisho noma ungekho umuthi. Ukushintshwa ngokwejwayelekile kokudla okunempilo, kusobala, akuselaphi ngokuphelele lesi sifo, kodwa kuyinto ebalulekile endleleni yokuphila yesiguli. Ngenxa yoshintsho olubushelelezi kushukela wegazi, ubungozi bokukhula kwezifo zemithambo yegazi, wezinzwa kanye nowenhliziyo buyehliswa. Noma ikuphi ukwelashwa isiguli esikuthathayo ngenxa yesifo sikashukela, ngeke kuthathe indawo yokudla.
Okubaluleke ngokulinganayo kwisifo sikashukela ukuphuza amanzi okuphuza ahlanzekile. Ihlanza umzimba, ibuyise ukugayeka futhi ithuthukise nokuqina kwesikhumba. Amanzi amaminerali angenawo amakhabhoni nawo ayasebenziseka kwabanesifo sikashukela. Kepha udinga ukukhumbula ngezinhlobo ezahlukahlukene zalo mkhiqizo ezitholakalayo kubantu abane-acidity ephezulu noma ephansi yesisu. Ukwakheka kanye ne-pH yamanzi amaminerali kungahluka kakhulu, ngakho-ke, iziguli ezinokuhlangana okuhambisanayo kohlelo lokugaya ukudla kufanele zinake leli phuzu.
Ukutholwa kwesifo sikashukela
Ngokuhambisana nazo zonke izindlela zokwelashwa ezichaziwe, indlela enjalo nayo isetshenziselwa ukudambisa isimo sesiguli njenge-acupuncture. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, uma usebenza ngezinaliti kumaphoyinti athile obuhlungu, ungabe usukwenza ukukhiqizwa kwe-insulin, uthuthukise izici zokwakheka kwe-lipid kuplasma wegazi, unciphise impendulo yokuxineka, futhi ubuyisele ukujikeleza kwegazi. Ngenxa yalokhu, izinkinga zesifo sikashukela zingavinjelwa.
Kulokhu, kufanelekile ukukhumbula ukuthi i-acupuncture yesimanje ingenziwa kusetshenziswa izinaliti ezinikezwa ngamagagasi kagesi. Ngenxa yalokhu, amangqamuzana alimele ayavuselelwa futhi abuyiselwe. Yonke inkambo ye-acupuncture imvamisa iqukethe kusuka ezinhlwini ezinhlanu kuya kweziyisikhombisa.
Ngaphezu kwalokho, lapho isiguli sinodokotela, angancoma izinhlobo ezithile zomsebenzi wokuzivocavoca, njengokuhamba ngebhasikidi, ukubhukuda, imidlalo yangaphandle nokuzivocavoca umzimba, kanye nokuhamba ngebhayisikile noma ukushushuluza. Imisebenzi enjalo ingenza izicubu zomzimba zithambekele kwi-insulin. Ngenxa yalokhu, isiguli akufanele sisebenzise i-insulin njalo noma siphuze imithi ebizayo.
Udokotela angakhetha indlela ephumelelayo futhi ephumelelayo yokwelashwa kwesifo sikashukela kuphela lapho isiguli sihlolwa ngokuphelele esibhedlela. Ungazikhethela ngokwakho ukudla noma ukuqala ukudlala imidlalo. Ngaphandle kwalokho, isiguli sizibeka engcupheni yokuthola inkinga yesifo esikhundleni sokwelashwa, okuzoba yingozi kakhulu impilo yakhe. Ividiyo ekulesi sihloko isitshela ukuthi ungaselapha kanjani isifo sikashukela ngaphandle kwemithi.
Ukwehlisa ushukela futhi usheshise imetabolism emithini yesintu, ama-infusions kanye nama-decoctions amakhambi asetshenziswa kaningi. Ngaphezu kwale mpahla, imali enjalo igcwala umzimba wesiguli ngamavithamini nangamaminerali, ngaleyo ndlela ithuthukise ukungatheleleki komzimba. Nazi ezinye zazo:
decoction wamaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka. Ku-200 ml wamanzi abilayo udinga ukufaka u-15 g wamaqabunga owomile ochotshoziwe, imizuzu engu-10 bese ugcizelela ngaphansi kwesivalo esivaliwe isigamu sehora. Kunconywa ukuthatha umhluzi ngesimo esiminyene, 100 ml kathathu ngosuku,
ukumiliselwa kwe-nettle. Amakhambi amasha ambalwa kufanele athelwe ngamanzi abilayo futhi ashiywe ku-thermos ebusuku. Ekuseni, ikhambi liyahlungwa bese lithululelwa esitsheni sengilazi. Kuyadingeka ukuthatha umuthi izikhathi ezingama-50 ml izikhathi ezintathu ngosuku isigamu sehora ngaphambi kokudla,
umhluzi wotshani wamahhashi. Ku-0,5 lamanzi abilayo, engeza u-2 tbsp. l impahla eyomile yesitshalo bese ibila imizuzu emi-5. Faka ikhambi amahora ama-3, ngemuva kwalokho kufanele ihlungiwe futhi ithathwe izikhathi eziyi-15 ml izikhathi ezi-3 ngosuku ngaphambi kokudla.
Ngokungeziwe ekwelashweni kokumiswa kokunye kwesifo sikashukela sohlobo 2 ngaphandle kwemithi, izithako ezingamakhambi zingasetshenziswa. Izici ezikhethwe kahle lapho zihlanganiswa zithuthukisa isenzo somunye nomunye futhi ziba usizo ngokwengeziwe. Isibonelo, ungalungisa ingxube equkethe izithako ezilandelayo:
Utshani be St wort
amaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka.
Zonke izinto zithathwa ngamanani alinganayo, zichotshoziwe ne-2 tbsp. l ingxube elungiselelwe ithululelwa ku-0.5 l wamanzi abilayo. Kungcono ukugcizelela lo mkhiqizo ubusuku bonke ku-thermos (ukuze kukhishwe izithako eziningi kusisombululo). Kunconywa ukuthatha ukumnika ngendlela ekhubazekile ka-60 ml kathathu ngosuku imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla.
Inzuzo yokusebenzisa izitshalo zokwelapha ukuthi ayiphoqi umzimba wesiguli ukuthi usebenze kuze kufike umkhawulo. Isenzo somuthi wamakhambi sinobumnene, izingxenye ezisebenzayo zebhayoloji zibuyisela izinkomba ezidingekayo kuphela ezinkambisweni zemvelo (zomzimba).
Kunengqondo yini ukwelapha isifo sikashukela sohlobo 1 ngaphandle kwemithi?
Okokuqala udinga ukungena ekujuleni kwenqubo yesifo. Kubonakala ngokungabi nalutho ngokuphelele kwe-insulin, okwenzeka ngenxa yokungasebenzi kahle kwamaseli e-pancreatic B.
Ukuphela kwento engenziwa kuleli cala ukugcwalisa lokhu kusilela kwe-insulin ngemijovo empilweni yomuntu yonke. Azikho ezinye izindlela ezizosiza ukubhekana ngokuzimela ngenkambo yesifo sikashukela sohlobo 1. Ngeshwa, isifo sikashukela sohlobo 1 okwamanje aselapheki futhi sidinga ukwelashwa okuqhubekayo.
Imithi yendabuko, noma abagqizi bezingane zayo ngamakhambi abo angathembekile bangenza lutho. Kodwa uma ungaphenduki ekwelashweni kwe-insulin, imiphumela enjalo engemnandi ilindele isiguli:
Isifo sonyawo sikashukela
Futhi ekugcineni - ukufa.
Ngokungafani noshukela othembela ku-insulin, uhlobo lwesibili lubonakala ngokushoda kwe-insulin egazini. Uhlobo lwesifo oluzimele lwe-insulin alula ngandlela thile, noma lungaholela ekufeni ngenxa yalokho, uma i-pancreas ingagcinwa nomuthi onezidakamizwa ezifanele.
Kodwa-ke, Uhlobo 2 lwalesi sifo luyelapheka, futhi unganciphisa amazinga kashukela egazini ngama-decoctions amakhambi. Yize lokhu futhi kubeka ingozi ethile esigulini. Izinto zokuqala kuqala.
Isazi se-endocrinologist sibuye siphathe isifo sikashukela sohlobo 2 ngaphandle kwezidakamizwa lapho isiguli sifika kuye okokuqala sinezikhalazo eziwuphawu lwalesi sifo. Njengomthetho, i-insulin-ezimele ikhula kakade ekubeni umuntu mdala, futhi ikakhulukazi ngenxa yokukhuluphala.
Ngakho-ke, ukumisa ukukhula kwesifo, udinga ukwehlisa isisindo. Imvamisa lokhu kuyasiza ngempela uma isiguli sizama futhi sivumelana nakho konke ukunconywa kukadokotela maqondana nokudla. Futhi kuphela lapho le ndlela yayingasebenzi, udokotela ubheka ukukhethwa komuthi ozosiza ushukela ukuthi ungenwe kahle.
Izindlela eziyinkimbinkimbi zizokusiza ukuqeda lokhu kugula. Owokuqala, ubaluleke kakhulu, wachazwa ngenhla - lokhu ngukudla. Ukwenza ukwelashwa kwesifo sikashukela kwenzeke ngaphandle kwezidakamizwa, kuyadingeka ukubuyisela ukusebenza kahle kwamanyikwe.
Yini edingekayo kulokhu:
Ukudla okunezithelo - kuvame, kepha ngezingxenye ezincane,
Ukwenqatshwa ngokuphelele kokudla kwe-carbohydrate - imikhiqizo yebhikawozi, amaswidi, iziphuzo ezinekhabhoni nokunye,
Ukubala amayunithi wesinkwa uma uhlelo lokudla okungenamsoco we-carbohydrate lungakwazi ukuhunyushwa lube yiqiniso.
Qiniseka ukuthi uphila impilo esebenzayo. Lapho umuntu ehamba, ushukela omningi udliwa egazini lakhe. Futhi uma ugijima njalo, gibela amabhayisekili, ubhukuda, noma uthatha izinyathelo ezilula - azikho izidakamizwa ezinoshukela osezingeni eliphansi ezidingekayo. Isiguli siyozizwa simnandi.
I-sanatorium inketho enhle yokuhlanza umzimba nokubuyisa ukusebenza kahle kwazo zonke izitho nezinhlelo zayo. Kungani kuthiwa ukuthosiwe, okunosawoti, okunezipayisi akunampilo? Ngoba konke kuvala umzimba. Abantu bezwile nge-slag. Ngakho-ke, kungenxa yabo ukuthi izinkinga zesibindi ziqala, lapho ushukela "ugcinwa" kamuva.
Futhi emgodini wokugaya ukudla, ubuthi buthanda futhi "ukuphila". Ukwelashwa kweSanatorium-resort kuzonikeza umzimba zonke izinto ezidingekayo ezisebenzayo, ususe izinto eziyingozi kuwo futhi ubuyisele ukusebenza okufanele kwazo zonke izinhlelo.
Akumele sikhohlwe ukuthi ukwelashwa kwesifo sikashukela ngaphandle kwezidakamizwa kungenzeka ngosizo lwemithi yendabuko. Ukwelapha amakhambi nezinye izinto zemvelo ngeke zikwazi ukubhekana noshukela wegazi akukho okubi kakhulu kunemithi yokwelapha. Bangashukumisa amaseli e-B ukuthi akhe i-insulin (njenge-ginseng), futhi asuse i-cholesterol, ngaleyo ndlela ehlanza isibindi futhi enze ngcono umgudu wokugaya ukudla (njengembewu yefilakisi).
Ukwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 2 ngaphandle kwezidakamizwa esiteji sokuqala kungenzeka impela, kepha kusalulekwa ukuthi ukwenze lokhu nodokotela wakho futhi uhlole njalo ushukela wakho wegazi ukugwema imiphumela emibi nezinkinga ezimbi kakhulu.
Ngaphezu kokudla, imifino nezithelo zingasetshenziswa esikhundleni samakhambi okwelapha ukulungiselela ama-decoction okwelapha kanye ne-infusions. Imikhiqizo enokuqukethwe okunoshukela omncane nokuhlanganiswa kwamakhemikhali abalulekile ilungele le njongo. Isibonelo, i-rosehip, eyaziwa ngezinzuzo zayo kubo bonke abantu abanesifo sikashukela, ingasiza ukukhulisa ukumelana komzimba nezifo. Ngaphezu kwalokho, isiphuzo sihlanza umzimba wobuthi nobuthi futhi sehlise i-cholesterol yegazi.
Ukuze ulungiselele ukumnika kwe-rosehip udinga 2 tbsp. l Amajikijolo omisiwe athululela ama-500 ml wamanzi abilayo bese ibila imizuzu engu-15. Ngemuva kwalokhu, isixazululo kufanele sifakwe amahora angama-10-12 ngaphansi kwesivalo esivaliwe. Thatha ngendlela efekethisiwe engilazini cishe imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla. Isiphuzo siqukethe inani elikhulu le-Vitamin C, elinomphumela omuhle esizweni semithambo yegazi.
Ijusi le-cranberry liyasiza kuma-diabetes, anciphisa ukuvuvukala, aqinise umfutho wegazi futhi ahlanze isinye isihlakala somchamo nezinso usawoti. Ngosizo lwayo, isifo sikashukela singalashwa cishe nazo zonke iziguli, ngaphandle kwalabo abanenkinga yokungezwani komzimba. Ngakho-ke ukuthi iziphuzo zokuphulukisa azilimazi isiguli, ushukela ngeke ungezwe kuzo. Kuyinto engathandeki futhi ukusebenzisa izikhala zikashukela ekwakhiweni kwazo, kungcono ukushiya kuphela izinto zemvelo ekwakhiweni kwazo.
Esikhathini sikashukela, kuyacebisa ukucebisa ukudla kwakho ngemifino enempilo enjalo nezithelo:
Isifo sikashukela esisebenzayo ukudla ulamula kanye negalikhi. Le mikhiqizo ihlanza imithambo yegazi ne-cholesterol ephansi. Zisebenza izinqubo ze-metabolic futhi zithuthukisa ukugaya, okuvame ukunciphisa ijubane ngenxa yesifo sikashukela.
Isifo sikashukela mellitus sanoma yiluphi uhlobo sandisa umthwalo ezinhlizweni nasemithanjeni yegazi, sandisa ingozi yokuhlaselwa yisifo senhliziyo kanye nesisindo somzimba. Ukuzivocavoca umzimba ngokuzivocavoca kuyasiza emzimbeni obuthakathaka futhi kukuvumela ukuthi ubhekane nalezi zinkinga. Kepha sikhuluma ngemithwalo esezingeni eliphansi ezothuthukisa imetabolism, hhayi ukukhishwa nokuqeda isiguli.
Izinzuzo zokuzivocavoca umzimba okhethwe kahle zisobala:
ukuhamba kwegazi kuyathuthuka
ubungozi bokuhlaselwa yisifo senhliziyo kanye ne-thrombosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi kuncishisiwe,
isisindo somuntu senziwe ngendlela ejwayelekile
ukuzwela kwezicubu kukhuphuka kwe-insulin
Vele, ngaphambi kokuthi uqale ukubandakanyeka ekunakekelweni kwanoma yikuphi ukuzivocavoca (ngisho nokusindisa kakhulu), udinga ukubonana nodokotela. Uzocacisa ukuthi lolu hlobo lomthwalo ulufanele isiguli, futhi uzokutshela ukuthi ungakwenza kaningi kangakanani ukuze ezemidlalo zilethe izinzuzo kuphela. Ngesikhathi sokuqeqeshwa, kunokuqedwa kancane kancane kwamafutha omzimba nokwakha izicubu zomzimba. Inhliziyo iqala ukusebenza kakhulu, isimo sesikhumba siyathuthuka.
Amafutha amaningi emzimbeni, okubi kakhulu amaseli awo amunca i-insulin. Lapho uthola izicubu zemisipha, umphumela ophikisanayo uyabonakala, ngakho-ke bonke abanesifo sikashukela badinga ezemidlalo. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi ngezinkinga ezikhona noma i-concomitant pathologies, isiguli singavinjelwa emithwalweni yenhliziyo nama-aerobics. Lapho ukhetha ezemidlalo, kuyadingeka ukubheka izici zomuntu, ubukhulu besifo sikashukela, iminyaka yakhe, isisindo, njll. Ukuzivocavoca umzimba kunciphisa ushukela wegazi, ngakho-ke udinga ukulihlola njalo nge-glucometer bese ulungisa ukudla okudlayo ngaphambi nangemva kokuqeqeshwa, ngokuya ngezincomo zikadokotela wakho.
Uma umzimba wesiguli ungaqeqeshiwe, awukwazi ukuqala ngokuzivocavoca kanzima. Kungcono ukunikela ngokuthandwa kokuzivocavoca okukhanyayo, ukwelula, ama-Pilates noma ukuzivocavoca ngebhola lokuzivocavoca. Njengoba ukuqina komzimba womuntu kuthuthuka, ungazama eminye imidlalo evunyelwe. Lokhu kungafaka ukubhukuda, i-callanetics, umzimba, i-yoga kanye ne-aerobics enamandla.
Ama-seasonings amaningi wemvelo akagcini nje ngokuthuthukisa ukunambitheka kokudla, kodwa futhi abe nomphumela obalulekile wegciwane. Ezinye zazo zisetshenziselwa ngempumelelo ukulwa nesifo sikashukela. Ukusetshenziswa kwazo kubaluleke kakhulu ezigulini ezinesifo sohlobo 2, ezingancikile emjovo we-insulin. Iziguli eziningi zaphawula ukuthi ukusetshenziswa okuhlelekile kwezinongo ezithile kwabasiza ukuba balondoloze amazinga evamile kashukela esikhathini eside.
Izinongo ezilandelayo zithathwa njengezisebenziseka kakhulu kushukela:
I-Cinnamon yehlisa ushukela wegazi futhi isiza ukuvimbela i-atherossteosis. Amakhehla nojinja kukhulisa ukungatheleleki futhi kuthuthukise ukuhamba kwegazi. I-Cardamom ithuthukisa ukugaya, ivimbela ukubukeka kwezinkinga zokubuka futhi ibuye isebenze kahle ohlelweni lwezinzwa.
Izinongo zingafakwa ezitsheni ezijwayelekile kanye netiye ukuze zibanike iphunga nokunambitheka okunezipayisi, futhi zingabuye zenziwe kabusha ngamanzi abilayo futhi zifakwe imizuzu engaba ngu-30, bese ziphuza esikhundleni sezinye iziphuzo. Lapho ukhetha i-flavour e-flavouring, udinga ukubheka ukuthi ezinye zazo zingadala i-allergies ezinzima, ngakho-ke udinga ukuqala ngokusebenzisa inani elincane kakhulu.
Ukuzivocavoca kanye nomzimba
Ngemuva kweseshini, isimo somuntu sithuthuka, uzizwa egcwala amandla, naphezu kokukhathala okumnandi emzimbeni. Ukuzivocavoca kukhuthaza ukusebenza kahle kohlelo lwezinzwa, kuvumele ukulala futhi kusheshise imetabolism. Kubalulekile ukuthi le nqubo yenziwa ngumuntu ofundela ubudokotela, oqonda kahle izici ze-anatomy kanye ne-physiology. Uma umuntu onesifo sikashukela enezinkinga ezihlangana nomfutho wegazi, khona-ke kuya ngenqubo yoku-massage, ungakunciphisa kancane (usize ukunciphisa nge-hypertension noma, ngakolunye uhlangothi, uthambise umzimba ngamandla obuthakathaka nobuthakathaka).
Ezindlela zokwelapha zokwelapha, izindlela eziwusizo kakhulu kwabanesifo sikashukela yilezi:
ukugeza okuhlanganisiwe nokwamaminerali,
ukuthatha i-oksijini yama-oxygen.
Amabhati ahlanza umzimba wobuthi nemikhiqizo yokugcina yemetabolism ngokusebenzisa ama-pores esikhunjeni. Baqabula izicubu zomzimba, basebenzise ukugeleza kwegazi okujwayelekile futhi bathuthukise ukusebenza kwesistimu yezinzwa ephakathi. Ama-electrophoresis kanye nozibuthe avame ukusetshenziselwa ukwelapha nokuvikela isifo sikashukela sikashukela. Ngesikhathi salezi zinqubo, i-nerve conduction, sensitivity ye-tactile iyabuyiselwa futhi izinqubo ze-metabolic zendawo ziyathuthuka. Ama-oksijini ama-oksijini asuselwa emjusweni we-apula ongenashukela ovimbela ukukhula kwe-hypoxia (indlala yomoya-mpilo) futhi anelise umzimba obuthakathaka ngezakhi eziwusizo.
Izindlela zokwelapha ezingezona izidakamizwa zidlala indima enkulu ekuthuthukiseni isimo sesifo sikashukela. Kuliqiniso, ngenxa yobukhali besifo kanye nobukhali besi sifo, kuyaqabukela kungaba yindlela ezimele futhi okuyiyo kuphela yokusiza. Kepha sibonga kakhulu, kungenzeka ukuthi kuthuthukiswe ukusebenza kwezinqubo eziningi emzimbeni futhi kunciphise nesidingo sesiguli semithamo ephezulu yemithi.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 2 ngaphandle kodokotela nemithi
Lokhu kungenxa yokuthi kusetshenziswa amakhambi emvelo, kanye nokuzivocavoca umzimba okhethekile nezinye izindlela zokuthonya umzimba, ukuvumela ukuthi ulondoloze izinga elamukelekile le-glucose.ads-mob-1
Ukuze ushukela ungavuki, kufanele unamathele ezimisweni ezithile zokudla komsoco:
thatha ukudla kancane, kepha kaningi- kuze kube izikhathi ezi-6 ngosuku,
imenyu ifaka izitsha nokudla okunenkomba ye-glycemic ephansi,
kudla okungenani amalitha ama-2 amanzi uketshezi ngosuku,
khipha amafutha agcwele, ama-carbohydrate alula notshwala.
inhlanzi, ukudla kwasolwandle kanye nenyama engenamafutha,
okusanhlamvu okususelwa kugrits coarse,
izithelo ezisawolintshi, kanye no-apula oluhlaza ongafakiwe, ama-cherries nama-cherries,
iklabishi neminye imifino enenkomba ephansi ye-glycemic - ukhukhamba, i-zucchini, imifino,
Ungaselapha kanjani lesi sifo usebenzisa amakhambi abantu: izindlela zokupheka
Umuthi wendabuko wazi amathuluzi amaningi nezindlela ezisiza ukugcina impilo ejwayelekile yabantu abanesifo sikashukela.
Ukuyilungiselela, udinga izithelo ezihlanzekile nezomile ze-oki. Kufanele zibe ngumhlabathi zibe ufulawa, bese uthatha isipuni esiswini esingenalutho, uhlanze phansi ngamanzi kahle.
Ukuyipheka, udinga ukuthatha amaqabunga amathathu asayizi aphakathi bese uthele ingilazi yamanzi abilayo, bese uphikelela ngesigamu sehora. Phuza noju oluncane.
Kukhona enye indlela: faka amaqabunga ayi-8 esitsheni esingenamuntu, uthele amalitha amabili amanzi bese ubila.
Ngemuva kwalokho, vumela ukupholisa, bese ubeka amasonto ama-2 endaweni emnyama, epholile. Thatha isigamu sengilazi ngosuku uma izinga likashukela lingaphezu kuka-7 mol / l, kuthi ku- 10 mol / l nangaphezulu kufanele uphuze ingilazi yomhluzi. I-Ads-mob-2
Ngohlobo 2 lwesifo sikashukela, i-oat decoction isiza ukuthuthukisa isimo, okufanele silungiselelwe kusuka okusanhlamvu okuphelele. Ingilazi yezinto ezibonakalayo eluhlaza ithululelwa amalitha amabili amanzi bese ifakwa emlilweni ophansi ihora. Umhluzi ophumile uyahlungwa, uqedwe bese ufakwa esiqandisini.
Emini, kuvunyelwe ukuthatha izingilazi ezimbalwa zalesi sikhambi, ngoba i-oats isebenza kakhulu ekunciphiseni ushukela.
Izipuni ezi-4 zezinxalenye eziwugqinsi ezivela ezitsheni ze-walnut zithulule ama-200 ml wamanzi bese uzivumela ukuthi zibilise, bese ugcizelela ihora Bese upholile, govuza bese uphuza isipuni esisodwa ngaphambi kokudla.
USolwazi I.P. INeumyvakin ithole indlela yokulwa ngempumelelo noshukela ngokusebenzisa i-baking soda nesixazululo se-hydrogen peroxide. Uthi kuyasiza ukuthi:
ukuhlanza umzimba wezimbali ezinama-pathogenic,
ukusheshisa izinqubo ze-metabolic,
siletha esimweni se-alkaline ne-acid esele,
ukucebisa kwegazi nomoya-mpilo.
Uprofesa uxwayisa ngokuthi:
umthamo omkhulu wansuku zonke we-peroxide awona ngaphezu kwamaconsi angama-30,
Amaphesenti amathathu kuphela uketshezi olungele ukwelashwa,
kufanele kuthathwe imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla noma amahora amabili ngemuva
Ukulungiselela ikhambi, kungcono ukusebenzisa amanzi afudumele.
Ngaphezu kwalokho, i-I.P. INeumyvakin idonsela ukunaka kulezi zici ezilandelayo zokwelapha:
kumthamo wokuqala, kudonswa ithonsi elilodwa le-peroxide elifakwe isipuni samanzi,
ngosuku ngalunye olulandelayo, umthamo unyuswa ngethonsi,
inkambo - azikho ngaphezu kwezinsuku eziyi-10. Ngemuva kokumiswa okwesikhashana kwezinsuku ezinhlanu, kufanele kuphindwe,
ngosuku lokugcina lokwelashwa, inani lemali kufanele lifinyelele amaconsi ayi-10 nge-200 ml yamanzi,
isigaba esilandelayo sokwelashwa, ngemuva kwekhefu, kufanele siqale ngamaconsi ayi-10. Ngokuhamba kwesikhathi, inani labo kufanele lenyuswe, kepha ukuze kuthi ekugcineni kube ngaphezulu kuka-30.
Lo profesa uthi ngale ndlela hhayi kuphela isifo sikashukela, kodwa namanye ama-pathologies amaningi angalapheka.
Ngokuqondene ne-baking soda, ululeka ukuyisebenzisa kanjena:
uthele ingxenye yesine yesipuni esincane sefulawa nengxenye yengilazi yamanzi abilayo, bese upholile,
phuza izinsuku ezintathu, ngama-sips amancane, kathathu ngosuku, ikota yehora ngaphambi kokudla,
khona-ke kufanele uthathe ikhefu lezinsuku ezintathu bese uphinda isifundo, kepha manje isisombululo kufanele silungiselelwe kusuka ku-200 ml wamanzi kanye no-0.5 ithisipuni likasawoti.
Ngokuvumelana nendlela efanayo yokwelashwa, kufanele uthintane nodokotela wakho, ngoba le ndlela inezimpawu zokuphikisana, kufaka phakathi:
uhlobo lwesifo esincike eku-insulin,
ukuba khona komdlavuza
acidity ephansi yejusi esiswini,
i-pathologies engapheli esigabeni esibi,
i-gastritis kanye nesilonda esiswini.
Izitshalo eziphilisayo zisetshenziswa kabanzi ekwelapheni isifo sikashukela. Nazi ezinye izindlela zokupheka ezidumile:
Ama-Blueberries namaqabunga uthele uhhafu welitha lamanzi abilayo bese wenza mnyama phezu kokushisa okuphansi cishe imizuzu eyi-10. Bese upholile, hlamba bese uthatha isigamu sengilazi imizuzu eyi-15 ngaphambi kokudla.
Utshani bebuzi nquma, thatha umthamo wezipuni eyodwa bese uthele izingilazi ezimbili zamanzi abilayo. Ipholile bese uthatha inkomishi yekota ngaphambi kokudla.
Amahlamvu wamahhashi, owomile noma osanda kusikwa, uthele kahle, uthele uhhafu wamalitha wamanzi bese ubasa umlilo. Ngemuva kokubilisa, yehlisa ilangabi lesishisi bese ubila amanye amahora ama-3. Emva kwalokhu, phola futhi uxakeke. Thatha ama-50 ml isikhathi ngasinye ngaphambi kokudla.
Ukulwa nesifo sikashukela, kunezindlela nezindlela eziningi. Ezinye zazo azijwayelekile.
Ukuphefumula ngokuphefumula kuyindlela ekhethekile esetshenziswa njengengxenye yokwelashwa okuphelele.
Kukholelwa ukuthi ukuzijwayeza ukusebenza njalo kuzofeza ukuthuthuka okukhulu.
Kuze kube manje, wathuthukisa izivivinyo ezikhethekile ukunxenxa ukushoda komoya-mpilo:
Exhale. Kufanele kwenzeke ngaphakathi kwemizuzwana emi-3 futhi kungathi umuntu ushaya isiphuzo esishisayo, ahambisane ne “oooh” ende.
Ukuphefumula komoya. Lo ngumsebenzi onzima ngokwengeziwe, ngoba kunezindlela ezi-3 zokuwenza:
ukulingisa. Vula umlomo wakho ngomsindo omfishane we- “k” noma we- “ha”, kepha ungangeni umoya ngokujulile. Exhale ngokohlelo. Uma uzizwa unesiyezi, misa ikhefu bese uqhubeka,
ngokweqile. Ihlala isigamu sesibili futhi yenziwa ngokuthwebula inani elincane lomoya. Kufanele ukhiphe ngokuya ngohlelo.
ngokulinganisela. Kuthatha owesibili futhi kushintshana ngokuphefumula okulandelayo okubushelelezi.
I-Acupuncture futhi iyisisulu esihle kakhulu sokwelashwa okuyisisekelo.
I-acupuncture kushukela ikhuthaza ukuhlanganiswa kwe-insulin yi-pancreas, kwehlisa ushukela wegazi.
Umphumela wokwelapha uchazwa kalula: usebenza ngamaphoyinti asebenza ngokusebenza, izinaliti zivuselela uhlelo lwezinzwa, olwenza umsebenzi womzimba wonke usebenze kakhudlwana.
Odokotela bathi izikhathi ezijwayelekile zokugomelana, ngaphezu kokuqinisa amazinga kashukela:
thuthukisa inhlala-kahle kanye nesimo esejwayelekile sesifo sikashukela,
ukuvikela okuhle kwe-neuropathy yesifo sikashukela,
vumela ukuthi wehlise isisindo somzimba,
thuthukisa ukusebenza kwenhliziyo nemithambo yegazi.
Kususelwa emcabangweni wombhali wale ndlela, umeluleki wezokudla kwaseMelika uK. Monastyrsky - ukuthi noma yimaphi ama-carbohydrate ayingozi kushukela, ngoba aphazamisa ukumuncwa kwamaprotheni kanye nezinqubo ezivimbayo.
Ubuye abheke i-fiber njengengadingekile, ngakho-ke, uphakamisa ukuthi ukudla okuphambana ne-carbohydrate metabolism kufanele kususelwe ekudleni okusebenzayo, okusekelwe kumaprotheni enyama kanye namafutha.
Kodwa-ke, ukholelwa ukuthi ngale ndlela kungenzeka ukuthi aqede ushukela ngaphandle kwezidakamizwa.
Umbono kasokhemisi oqinisekisiwe uK. Monastyrsky, owayeke waphothula eLviv Medical Institute futhi wathuthela e-United States, ubengasebenelanga usuku ngobungcweti futhi waba ngumeluleki wezondli emva konyaka wokufunda ezifundweni zaseMelika, odokotela abaningi bacabanga ukuthi, uma kungenangqondo, ngakho-ke okungenani kube nempikiswano. .ads-mob-2
Kufanele ngabe abanesifo sikashukela bayeke izidakamizwa: kusho odokotela
Futhi lokhu yize iqiniso lokuthi:
zohlobo lokuqala lwe-pathology, ukwelashwa kwe-insulin kuyinto eyisisekelo yokwelashwa,
ngesifo sikashukela sohlobo 2, odokotela kungenzeka bangasiniki leso leso sikhathi, kodwa ezimweni eziningi isimo sidinga ukwethulwa kwehormoni ngisho nasencwadini yedolobha, lapho ukusebenza kwe-beta-cell sekuvele kuncishisiwe uhhafu, okusho ukuthi amanyikwe awukwazi ukwenza umsebenzi wawo.
Ngokuhamba kwesikhathi, kudingeka ukuthi imijovo ye-insulin ivele ngokungenakuvinjwa, ngoba nangezinye izindlela akunakwenzeka ukubuyisa ukungasebenzi kahle kwe-gland. Ukunganaki leli qiniso kungubucayi, ngoba ayikho indlela yokwenza ngaphandle kokufakwa kwehomoni, lapho umzimba wesifo sikashukela uhlupheka ngenxa yokuntuleka kwayo okukhulu.
Ngokuqondene nezindlela zokwelapha ezichazwe ngenhla, eziningi zazo, ezisetshenziswa ngemvume kadokotela oholayo, zingangezela okuhle ekwelashweni okuyinhloko, kepha azikwazi ukubuyisa ngokuphelele.
IGurvich, M.M. Ukudla ngesifo sikashukela mellitus / M.M. IGurvich. - M: GEOTAR-Media, 2006. - 915 k.
Inani le-cholesterol. Isifo sikashukela Iphosta - M: I-AST, i-Astrel, isivuno, i-2007 .-- 986 c.
Isiqondisi se-Gitun T.V. Umhlahlandlela wokuxilonga we-endocrinologist, AST - M., 2015. - 608 k.